नेपालमा टर्की पालन र यसकाे सम्भाव्यता - कृषि डेली
Home banner नेपालमा टर्की पालन र यसकाे सम्भाव्यता
नेपालमा टर्की पालन र यसकाे सम्भाव्यता
परिचयः टर्की मासुको लागि पालिने चरा हो । युरोप र अमेरिकामा क्रिसमसको समयमा टर्की नभै हुँदैन । ग्यालीफर्मस (Galliformes) अन्तर्गतको दुई जाति (species) एग्रोचारिस वा मेलाग्रिस वासिलाट
(Agrocharis or Melagrias ocellata ) र कमन टर्की मध्ये प्रचलित कमन टर्की उत्तर अमेरीकाको स्थानीय खेल खेलाउने चरो हो । तर यो मासु खानका लागि पनि उत्तिकै रुचिका साथ पालिन्छ । यसको विकास मेक्सीकोबाट भएको हो त्यसपछि तुरुन्तै इटलीले लग्यो । त्यसपछि स्पेन हुँदै युरोप अमेरिका र एशिया भरी नै छायो । यी दुई प्रकारका टर्कीमा पनि हावा पानी र भौगोलिक प्रभावले गर्दा विविधता पाईन्छ ।
जातहरु: हुन त टर्कीका धेरै जातहरु विकास भएका छैनन् तैपनि अमेरीकाको पोल्ट्री संस्थाले विकास गरेका जातहरु व्रोन्ज, ह्वाईट हलैण्ड, व्राउन रेड नार्गान सेट, कालो स्लेट र स्मल ह्वाईट मुख्य हुन् । त्यस्तै जंगली जातवाट विकास गरिएका व्रोड व्रेनटेड व्रोन्ज र व्रोड व्रेन्टेड ह्वाइट हुन् ।
नेपालमा टर्की पालन : नेपालमा टर्की कहिले आयो भन्ने कुराको एकिन गर्न नसकियता पनि यसको पालन भने काठमाडाैमा फाट्ट फुट्ट देखिन्छ । परवानीपुर कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा मिडियम ह्वाईट जातको टर्की २०५७ सालमा भारतको वरेलीवाट ल्याईएको हो । यहाँवाट व्यवसायिक रुपमा टर्की पालन गर्न चाहने कृषकहरुलाई चल्ला र प्रविधि वारे जानकारी दिईन्छ । वढी मूल्यमा वेचविखन हुने यो टर्कीको पालन निम्न अनुसार गर्न सकिन्छ ।
तालिका १. टर्कीलाई खुवाउने दानामा उमेर अनुसार प्रोटीन र शक्तिको मात्रा निम्न अनुसार हुनुपर्छ ।
तह उमेर प्रोटिन (प्रतिशत ) शक्ति/के.जी.
स्ट्रायर–१ २–४ हप्ता २६ ३००० क्यालोरी
डेभलपर १२–१५ हप्ता १८ ३२२५ क्यालोरी
फिनिसर–१ पोाथी १२–१६ हप्ता १६ ३२७५ क्यालोरी
माथिको तालिका अनुसार शुरुको उमेरमा २८ प्रतिशत सि.पि. (Crude Protein) भएको दाना दिईन्छ । त्यसपछि चल्ला ठूलो हुँदै जाँदा प्रोटीनको मात्रा घटाउँदै जानु पर्दछ । यसरी टर्कीलाई विभिन्न तहको उमेरमा विभिन्न मात्रामा प्रोटीन र शक्ति भएको दाना दिनुपर्छ ।
व्यवस्थापन: एउटा वयस्क भाले टर्की २४ हप्तामा १.३ मी. अग्लो र १२ देखि १५ किलो तौल सम्मको हुन्छ । यस्तै पोथी टर्की भाले भन्दा सानो र ८ देखि १० किलो तौल सम्मको हुन्छ । टर्कीको भाले,पोथी पहिचान १२ –१३ हप्ताको उमेरमा गर्न सकिन्छ । ५ वटा पोथीको लागि एउटा भाले सँगै राख्नुपर्छ । पोथीले ८र ९ महिना देखि फुल पार्न शुरु गर्छे । फुल ८० –८५ ग्राम तौलका हुन्छन् । फुल २८ दिन सम्म कोरले पछि चल्ला निस्कन्छ । टर्की ठूलो चरामा पर्ने भएकोले यिनिहरु ३ वर्षमा वयस्क हुन्छन् । टर्कीका चल्ला पनि कुखुराको चल्ला जस्तै हुर्काउन सकिन्छ । बढी नाफा कमाउन तालीकामा देखाए जस्तै उचित दाना पानी दिएर २०–२४ हप्ता उमेरमा बेच्नुपर्छ ।
यिनिहरुलाई खुल्ला बगैचा वा चउरमा छोड्न राम्रो हुन्छ । साथै थप चाराको लागि गहुँको चोकर, मकै, कनिका, मसिनो गरी काटेको तरकारीको टुक्रा विहान बेलुका दिनुपर्छ । जहाँ जग्गाको कमी छैन त्यहाँ ४–६ फिट अग्लो तारबार गरी १ कट्ठामा ५०–६० वटा टर्की पाल्न सकिन्छ । तीन, चार वर्षमा चरन क्षेत्र परिवर्तन गरिरहनु पर्छ । गाई भैंसी सँगै टर्की चराउन सकिन्छ तर बंगुर र भेडा सँग चराउन राम्रो हुदैन । जंगली जनावर र कुकुरले टर्कीलाई आक्रमण गर्दछ । त्यसवाट बचाउनु पर्दछ ।
व्यवसायिक रुपमा टर्की पाल्नेहरुले टर्कीलाई धानको भुस वा काठको धुलो लिटरको रुपमा व्यवस्था गरेर कुखुरा पाले जस्तै पाल्नुपर्छ । यसका लागि ४० फिट चौडा, ३०० फिट लामो, घर राम्रो हुन्छ । पाँच फिट अग्लो जाली लगाएर छाना हाल्नु पर्छ । भालेलाई पाँच वर्ग फिट र पोथीलाई चार वर्ग फिट ठाउँ चाहिन्छ ।
लामा दिनमा टर्कीको विकास छिटो हुन्छ तर दिन छोटो भएपनि तापक्रम ६५ डिग्री फरेनहाईट र दिन ११ घण्टा वा त्यो भन्दा वढीको छ भने पनि तिनीहरु छिटै वयस्क हुन्छन् । धेरै फुल उत्पादन गर्नको लागि पोथीलाई १८–२२ हप्ताको उमेरबाट अध्यारोमा राख्नुपर्छ । अध्यारोमा राख्दा १८–२० हप्ता उमेरमा ८ घण्टा प्रकाश तथा १६ घण्टा अध्यारो र २०–२२ हप्ता उमेरमा ६ घण्टा प्रकाश तथा १८ अध्यारोामा राख्नुपर्छ । यदि अध्यारोमा राख्न ढिला भयो भने २२ हप्ताको उमेरमा ४ घण्टा प्रकाश दिने र २० घण्टा अध्यारोमा राख्नुपर्छ । अध्यारोमा राखेको समयमा राम्रो हेरचाह पुर्याउनु पर्छ ।
रोगहरु: कुखुरालाई जस्तैः टर्कीलाई पनि कुखुरामा लाग्ने रोगहरु लाग्दछन् । तर कालो टाउको र टाउको सुन्निने रोग यसका प्रमुख रोगहरु हुन् । कक्सी, किर्ना, जुम्रा पनि यसलाई लाग्ने गर्दछन् ।
खोप: फूल पार्ने कुखुरालाई दिने जस्तैः खोप, रानी खेत, गम्वारो, फवल पक्स, फवल टाईफाईड आदि खोपहरु समयमै दिनु पर्दछ ।
लेखक प्रा.डा. मोहन प्रसाद शर्मा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा, पशु प्रजनन तथा जैविक प्रविधि बिभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
Previous articleसकियो नापाको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन
Next articleकृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले माग्यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट रजिष्ट्रार